बजेट बनाउन छाडेर विदेश
ललितपुर, १२ असार । ललितपुर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बजेट बनाउन छाडेर विदेश भ्रमणमा छन् । यसले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार महानगरपालिकाले असार १० भित्र पारित गरिसक्नुपर्ने आगामी आर्थिक वर्षको ...
काठमाडौँ, १२ असार । काठमाडौंबासीले यही असरादेखि नै बाग्मतीको पानी उपभोग गर्न पाउने भएका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना २ ले उपत्यकामा विस्तार गरिरहेको खानेपानी पाईपलाईनबाटै उपत्यकाबासीलाई खानेपानी खुवाउन लागिएको हो । ...
काठमाडौँ, ११ असार । विशेष अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डको अनियमितता प्रकरणमाथि अनुसन्धान गरेको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अनुसन्धान अधिकृतको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । पर्यटन बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारी गरी ...
काठमाडौँ, ११ असार । सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा मेलमिलापमुखी आसयसहितको नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकमा पीडित र ...
काठमाडौँ, १० असार । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्धारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई ५ हजार जरिवाना तोक्दै थप १५ दिन समय दिएको छ । सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाँकी १ हजार ९ सय ...
काठमाडौँ, १० असार । सरकारले राजधानीलगायत देशका प्रमुख सहरसँग जोडिएका पाँचवटा राजमार्ग पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको जनाएको छ । देशभर मनसुन सक्रिय हुनै लाग्दा सरकारले त्रिभुवन, पृथ्वी, अरनिको सिद्धार्थ बुटवल पोखरा र नारायणगढ ...
काठमाडौँ, १० असार । रिङरोड बन्नासाथ फेरि भत्काइने भएको छ । पुसमा चीनले हस्तान्तरण गर्ने र लगत्तै ठाउँ ठाउँमा भत्काइने योजना रहेको छ । चिनियाँ प्रविधि र प्राविधिक प्रयोग गरी निर्माण भएको कोटेश्वर–कलंकी ...
भक्तपुर, ९ असार । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले आज संवत् २०७४ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अर्थात कक्षा १० को परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको छ । परीक्षामा नियमिततर्फ चार लाख ५१ हजार ५३२ परीक्षार्थी ...
ज्यानमारा बन्दै ट्रिपर
काठमाडौं, ९ असार । चाँगुनारायण–३ का २६ वर्षीय राकेश खाइजू शुक्रबार बा. ८२ प ८४७३ को स्कुटर चढेर कमल विनायकबाट ब्यासीतर्फ आउँदै थिए । पछाडि आउँदै गरेको बा.१ क ३५५९ को ट्रिपरले ...
काठमाडौं, ९ असार । उपत्यकामा गुण्डागर्दीमा संलग्न कति डन छन् ? प्रहरीले डनहरूको सूची बनाएको छ । जसअनुसार, उपत्यकामा १९० डन छन् । उनीहरूविरुद्ध प्रहरी आक्रामक बनेको प्रहरीले अप्रेसन थालेको छ । ...
काठमाडौं, ९ असार । सार्वजनिक स्थलमा यौन क्रियाकलाप गरे कैद र जरिवाना हुने भएको छ । मुलुक अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १२३ मा यस्तो कारबाहीको व्यवस्था गरिएको हो, जुन आगामी भदौ ...
काठमाडाैं, ९ असार । सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट साउन १ गतेदेखि अन्त्य नहुने देखिएको छ । यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन गठित समितिका संयोजक एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव ...
अपराध स्विकारे ७५ प्रतिशत कैद मिनाहा
काठमाडौं, ८ असार । १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार हनन गर्ने दोषीले अपराध स्विकारे ७५ प्रतिशत कैद मिनाहा हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । तत्कालीन ...
निमित्तको भरमा स्थानीय तह चलाउनेको अधिकार रोक्का
काठमाडौं, ८ असार । स्थानीय तहका अध्यक्ष र मेयरले विभिन्न स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पठाइएका उपसचिव तथा शाखा अधिकृत तहका कर्मचारी फिर्ता गरी निमित्त रहेका नायव सुब्बाबाटै काम चलाउन ...